Countertop slab breccia rose calacatta viola marble ịkpụ ka ọ dị nha
Countertop slab breccia rose calacatta viola marble ịkpụ ka ọ dị nha
Calacatta viola marble bụ marble ọcha mara mma nke nwere akwara na-acha odo odo.A maara ya nke ọma maka njiri mara ya na veining.
Countertop slab breccia rose calacatta viola marble bee kanha
ngalaba ụlọ okomoko maka ala ala, ihe mkpuchi mgbidi, arịa ụlọ, wdg.
Calacatta viola marble bụ marble ọcha mara mma nke nwere akwara na-acha odo odo.A maara ya nke ọma maka njiri mara ya na veining.Viola calacatta marble bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ịgbakwunye ọgaranya na okomoko n'ime ime ụlọ ịwụ, kichin na ebe ọ bụla.
Breccia vagli marble slab bụ aha ọzọ maka Calacatta viola slab marble.Marble omenala Ịtali nke yiri akwa ice na-ese n'elu mmiri n'ime oke osimiri crimson.Nkume mara mma nke ga-apụta n'ọnọdụ ọ bụla.Calacatta Viola marble bụ ihe dị iche iche dị iche iche na-acha odo odo na uhie na-acha ọcha.Nkume Ịtali a maara nke ọma na-agbakwụnye okomoko na elu ọ bụla.
Calacatta viola marble bụ mabụ calacatta mara mma nke na-egbuke egbuke ma mara mma, nwere veining burgundy mara mma.Enwere ike iji ya mee nkwupụta nkwuwa okwu n'ụdị ngwa dị iche iche dị ka mkpuchi mgbidi, ime ụlọ na mpụga, ụlọ ịsa ahụ na ebe a na-ere ihe, na mmepụta ihe ịchọ mma pụrụ iche, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Nkume okike dị n'okpuru mgbanwe dị ka taịlị ọ bụla nwere elu ya pụrụ iche.Biko jụọ maka ịdị adị maka ihe ị chọrọ.
Nke gara aga: Italian osisi ọka classico bianco ọcha palissandro marble maka mgbidi
Osote: Ezigbo ọnụahịa Vietnam kristal na-acha ọcha mabụ maka ịchọ mma ụlọ
Ọnụ ala China guangxi ọcha marble maka wa...
Italy dolomite calacatta da vinci white marble
Natural Stone slabs odida obodo eserese marble f...
Italy ìhè beige serpeggiante osisi marble fo ...
Black Granite, Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Gray Granite, Gray Gray dị ọkụ, Granite odo odo,